Maxaa la sameeyaa haddii aad joojiyo ama la xiray by booliska | USAHello
Maxaa la sameeyaa haddii aad joojiyo ama la xiray by booliska
It is important to know your rights if you are stopped by a police or immigration officer or if you are arrested by police. Haddii aad su'aalo fulinta sharciga, ahaadaa qof asluub ​​fiican oo ixtiraam. Marna been, doodi, iska caabin ah, ama ka cararaan.
Sawirka Dave Conner / Wikimedia Commons
In USA, booliiska guud ahaan way wanaagsan yihiin oo ay doonayaan in ay ku caawiyaan. Laakiin waa in aad taqaanid xaqa aad. Waxaad leedahay xuquuq aad xitaa haddii aadan ahayn muwaadin Maraykan ah. Waa in aad ogaato in saraakiisha fulinta sharciga si kooban u qaban karo iyo inaad wax warsataan haddii ay ka shakiyaan in aad ay ku lug lahaayeen dembi. Waxay tani xitaa haddii aadan ay jiraan sababo ku filan in aad qabtaan samayn lahaayeen.
Xuquuqdaada haddii ay ku joojiyaan gaariga ama la xiray by booliska halka baabuur
Waxaad xaq u leedahay in aad aamusto oo aan ka jawaabo su'aalaha kasta.
Marka la helo ganaax (tigidh ah xawaaraha, tusaale ahaan) waa in aad keentaa liisanka darawalnimada, caymiska, iyo diiwaan galitaanka baabuurka haddii la codsado.
Sarkaalka ku weydiin karaan inaad talaabo ka mid ah gaariga. Waa in aad sameeyaan waxa ay ku weydiin.
Booliska looma ogola in ay hubiso gaariga haddii uu jiro "sabab tahay."
Ma aha in aad xaq u leedahay inaad ka baxdo haddii sarkaalka kuu sheegayaa in uu sii joogo.
hoos taabasho A waxaa caadi ahaan search dusha sameeyey in ka badan dharkaaga. Waxaa dhici kara haddii sarkaalka ayaa sabab in ay jiraan wax ka dhacdo laga shakiyo, laakiin isagu ama iyadu iyada oo jeebka ku haysato ma aan tegi karo. In search a, waxay leeyihiin hab dheeraad ah oo dhamaystiran halkaas oo ay ku baadhaan laga yaabaa in dhar aad hoos. Waxaad sharci ahaan laguu oggol in ay diidaan oo labadoodaba waxaa ka.
xuquuqdaada haddii lagu xiro by booliska ama loo qaaday saldhiga booliska
Haddii lagu xiro by booliska, waxaad xaq u leedahay in aad aamusto iyo la hadasho qareen.
Waxaa laguu oggol yahay in la sameeyo 3 taleefan gudahood 3 saacadood oo is xiray.
Waxaad macluumaad booliska aasaasiga ah adiga kugu saabsan, laakiin mar dambe ma sheegi karo ilaa aad qareen gaaray.
Ha kala hadlin xaaladda waddanka u soo guurey aad qof laakiin qareenkaaga.
Xuquuqdaada haddii sarkaal boolis ah ayaa doonaya in uu ka raadin gurigaaga ama baabuur
fulinta sharciga looma ogola inuu raadin gurigaaga adiga oo aan ogolaansho ama oggolaansho baaritaan sharci. waaran A waa warqad sharci ah in uu iyaga ka siinayo ogolaansho si aad u raadiso. Haddii aad guriga ka maqan tahay, booliiska gurigaaga ka raadin kartaa, haddii qaar kale ogolaaday in ay.
Ma aha in aad ha sarkaal galaan gurigaaga haddii aysan xujo.
xujo waa in la saxiixo xaakin.
Haddii mid sirkaal ah ayaa sheegay in on galo oo aan waaran, ha hor istaagina. Waxaad dhihi kartaa in aadan u ogolaan, ka dibna isla markiiba wac qareen.
Maxkamadda Sare ee kaliya ee u ogolaanaya sarkaal sharci fulin inuu guri u geli aan reebtay haddii ay qabaan "shaki macquul ah". Taas macnaheedu waa in ay la tahay wax sharci daro ah laga yaabo inay ka dhacaya. Waxay sidoo kale qabaa in muujinaya inay yihiin waxaa laga yaabaa in halis ah ama laga yaabo ogolaan la tuhunsan yahay in la burburiyo wixii caddeyn ah.
Wixii macluumaad dheeraad ah si ay u caawiyaan inaad fahamto xuquuqdaada, Waad awoodaa ka akhri “ogaato xuquuqdaada” macluumaad. Waxaa la diyaariyey oo shuraako la ah Adeega World Church, oo dalabyo low-kharashka adeegyada sharciga dalka u soo guuray.
Su'aalo iyo jawaabo ku saabsan la xiro ama xabsiga by booliska
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah jawaabaha su'aalaha laga yaabo inaad qabtid oo ku saabsan la joojiyo ama la xiray.
Ma inaan ka jawaabo su'aalaha la weydiiyay by fulinta sharciga?
Waxaad xaq u leedahay dastuurka inaad aamusnaato si aadan u baahan tahay in ay ka jawaabaan su'aalaha. Ma aha in aad in aad la hadasho askari walba ama qof kale. Waa fikrad wanaagsan inaad la hadasho qareen ka hor ka jawaabidda su'aalo ah. U sheeg sarkaalka booliiska aad doorato in aadan ka jawaabi. Laakiin mar walba ixtiraam iyo akhlaaq leh intii suurogal ah.
Sidee baan u dhaqmaan waa haddii aan joojiyay in aan baabuur?
Isku day inaad si tartiib ah u guuraan iyo in la hubiyo in aad mar walba aad gacmihiinna ku arki karo in sarkaalka. jidh ahaan Ha iska caabin ah taabasho ah ama search. halkii odhan, "Ma ogolaan in lagu baaro." Weydii sarkaalka haddii free inuu ka tago aad tahay, iyo haddii sarkaalka ayaa sheegay in ay haa tahay, ka dibna si degan ka tago. Si kastaba ha ahaatee, haddii sarkaalka ay yiraahdaan maya, waa in aad sii joogo. Marna cararaan, iyo Gacmihiinna sii waqtiga oo dhan la arki karo.
Maxaa dhacaya haddii aan ahay loola dhaqmo si xun by saraakiisha fulinta sharciga?
Waxaad xaq u leedahay inaad weydiiso sarkaalka si uu u macluumaad sida uu magaca iyo calaamad tiro. Isku day inaad hesho markhaatiyada iyo haddii aad ku dhaawacanto sawiro qaadataan sida ugu dhaqsaha badan. Wac qareenka ama xafiiska ilaalinta xuquuqda aadanaha ee xaafaddaada.
Ma inaan si ay u muujiyaan waraaqaha socdaalka haddii lay qabtay bilaysku?
Non-muwaadiniinta waa 18 sano ama ka weyn waa in waraaqaha ay fuliyaan iyaga la waqtiyada oo dhan. Haddii aad tahay sharci aan muujin karin US dokumentiyada socdaalka, waxaad dooran kartaa in aanad ka jawaabin su'aalaha ku saabsan xaaladdaada. Su'aalahani waxay ka mid noqon kara "Ma waxaad tahay qof muwaadin ah?"ama, "Halkee ka timid?"Ma been ma ku saabsan xaaladda, laakiin odhan halkii aad aan dooran in aad ka jawaabto.
Halkeen ka heli karaa khayraadka sharci oo bilaash ah? Halkee ayaan ka heli karaa caawinaad socdaalka free?
A qaxootiga hore ku biiray ciidamada bilayska Arizona
ACLU - Joogsaday by booliska
ACLU - Maxaa la sameeyaa haddii Police?
Macluumaadka on this page ka timaadaa ACLU, Church Services Adduunka, oo kale ku kalsoon tahay ilaha. Waxaa loogu talagalay hanuun iyo waa la cusboonaysiiyaa inta badan ee suurtogalka. USAHello ma siiyo talo sharci ah, mana ka mid ah waxyaabaha aannu loogu tala galay in la qaado, sida la-talin sharci. Haddii aad raadineyso qareen lacag la'aan ah ama qiime jaban ah ama caawimaad sharci, waxaan kaa caawin karnaa hesho adeegyada sharci oo bilaash ah iyo qiimo-yar.